Qulqulka Dhalinyarada Jumlada ah ayaa Hoos udhacay 29% sanadka 2020, Sahanka CDC wuxuu muujiyaa warshada iyo soosaarayaasha | SIGAAR
Vaping Teen ayaa hoos udhacay 29% sanadka 2020, Bandhigyada Sahanka CDC
Natiijooyinka sahaminta cusub ee ay soo saartay CDC waxay muujineysaa hoos udhac boqolkiiba 29 ah oo kudhaca dhallinyartii laga soo bilaabo 2019 ilaa 2020, taasoo keeneysa heerarkii ugu dambeeyay ee la arkay kahor 2018. Dabcan, CDC iyo FDA waxay doorteen qaab kale oo lagu soo bandhigo natiijooyinka.
Natiijooyinka la xushay (laakiin aan ahayn xogta ay ka yimaadeen) waxay qayb ka ahaayeen warbixin CDC ah oo la daabacay Sebtember 9-isla maalintaas oo ahayd xilliga ugu dambeeya ee soo-saareyaasha uumiga u soo gudbinaya Codsiyada Tubaakada ee loo yaqaan 'Premarket Tubaakada' ama ay alaabtooda uga saaraan suuqa. Xogta ayaa la heli doonaa, oo ay la socdaan falanqaynta dhammaan natiijooyinka, mararka qaarkood bisha Diseembar.
Isticmaalka 30-kii maalmood ee la soo dhaafay (oo loo yaqaan "isticmaalka hadda") ardayda dugsiga sare wuxuu ka dhacay 27.5 boqolkiiba ilaa 19.6 boqolkiiba, iyo hoos u dhaca ku yimid ardayda dugsiga dhexe ayaa xitaa ka sii darnaa, laga bilaabo 10.5 ilaa 4.7 boqolkiiba. Taasi waa war wanaagsan, sax? Waa hagaag…
Inkasta oo xogtani ay muujineyso hoos u dhaca isticmaalka sigaarka elektaroonigga ah illaa iyo hadda 2019, "falanqeeyayaasha CDC iyo FDA ayaa qoraya," 3.6 milyan oo dhallinyaro Mareykan ah ayaa wali isticmaala sigaarka elektaroonigga ah 2020, iyo dadka hadda isticmaala, in ka badan siddeed 10kiiba 10 ayaa soo sheegay inay isticmaalayaan sigaarka elektaroonigga ah. ”
Qorayaashu waxay soo jeediyeen in maadaama badeecooyinka dhadhanka leh ay weli jiraan, qoob-ka-ciyaarka dhallinta ayaan waligood hoos ugu dhici doonin heer (eber) oo qancin doona baahida loo qabo CDC iyo tubaakada xakamaynta tubaakada. Sidaa darteed warbixintu waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa doorbida dhadhanka isticmaalayaashan mararka qaarkood, iyadoo la xusay in miraha, reexaanta, iyo mentolku ay yihiin noocyada dhadhanka ugu caansan ee ka dhex jira dhammaan uumiga uumiga. Macnaha ay leedahay dhadhanka ayaa keenaya isticmaalka dhalinyarada waa daal, laakiin falanqaynta qaarkood waa mid xiiso leh.
Tusaale ahaan, ka mid ah “isticmaaleyaasha hadda ee dhadhannada dhadhankeeda la kariyey ee dhadhanka leh iyo kaydadka, noocyada dhadhanka ugu badan ee la isticmaalo waxay ahaayeen miro (66.0%; 920,000); reexaanta (57.5%; 800,000); menthol (44.5%; 620,000); iyo nacnac, macmacaan, ama macmacaan kale (35.6%; 490,000). ”
Laakiin Juul Labs, oo ka dhigaya waxa loo maleynayo inuu yahay midka ugu caansan dhalinyarada, ayaa ka saaray miraha qashinkooda suuqa wax ka badan sanad ka hor intaan sahaminta la dhameystirin. Midkoodna soo saarayaasha kale ee sharci ee waaweyn ee soodhada horay loo buuxiyay ma iibinaynin miraha ama nacnac-dhadhanka udgoon waqtiga sahanka midkoodna. Taasi waxay soo jeedinaysaa in qaybo badan oo ka mid ah "isticmaaleyaasha hadda" ay uumigayaan alaabada suuqyada cawliga iyo madow sida Juul-ku habboon boodhadhka ay sameeyeen soo saarayaasha aan la oggolayn.
"Ilaa iyo inta sigaar elektaroonig ah oo dhadhan ah looga tagayo suuqa, carruurtu gacmahooda ayay dul saari doonaan mana xallin doonno mashaakilkan," ayuu yiri Ololaha loogu talagalay Carruurta Tubaakada Bilaashka ka ah Matthew Myers. Dabcan, taasi waxay khuseysaa suuqa madow sidoo kale. Mamnuuca dhadhanka ma horseedi doono ka fogaansho, kaliya wax ka iibsiga ilaha cusub iyo kuwa la isweydiin karo.
Warbixinta CDC ayaa tilmaamaysa in la xuso in isticmaalka badeecada la tuuri karo ay ka kortay 2.4 boqolkiiba 2019 ilaa 26.5 boqolkiiba 2020 - koror boqolkiiba 1,000 ah! —Inaan sharraxin in badeecadahani inta badan ay ahaayeen jawaabta suuqa madow ee go'aanka soosaarayaasha qaanuunka. dhadhanka, iyo ka dib go'aanka FDA ee ahmiyadda koowaad la siinayo xoojinta kahortaga badeecooyinka ku saleysan boodhka. (Waxaa jira aragti madadaalo madadaalo leh oo soo jeedinaysa go'aanka FDA ee ah in laga dhaafo uumiga la tuuro laga bilaabo hagitaankeeda fulinta ee Janaayo 2020 wuxuu ahaa tijaabo lagu eegayo haddii suuqa madow ee sharci darrada ah uu si dhaqso leh uga jawaabi doono. Waxay sameysay.)
Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in uumiga dugsiga sare uu hoos udhacay qiyaastii seddex meelood meel, iyo udhaxeynta dugsiga dhexe in kabadan kala bar. Xaqiiqda ah in kabadan boqolkiiba 80 dhalinyarada ay isticmaalaan alaabada uumiga ee dhadhanka leh waa herring cas, maxaa yeelay waxaan horey u ognahay in uumiga qaangaarka badankood sidoo kale doorbidaan dhadhanka aan tubaakada lahayn, dhadhankaasina kama mid aha sababaha aasaasiga ah ee caruurtu isku dayaan uumiga.
Waxaa jira dhibaatooyin kale oo la xiriira NYTS marka laga reebo ku mashquulida dhadhanka. CDC waxay sahaminta ka saartay su'aalaha gaarka ah ee ku saabsan xashiishadda xashiishadda, taasoo ka dhigaysa ka-qaybgalayaasha inay go'aansadaan haddii su'aalahan ay khuseeyaan labadaba THC iyo vapot nicotine-ka. Ma garanayno inta carruur ah ee sahankan qaadaya inay yihiin uumiga THC, sababtoo ah CDC waxay u maleyneysaa inay dhammaantood nifaasayaan nikotiin, natiijooyinkoodana waxay u soo tebinayaan sidii ay iyagu yihiin.
Waxay noqon kartaa cabsidaas (aad u macquul ah) baqshiishka foosha xun ee THC varee oo sababay "EVALI" inay ku riixdo uumiga saliida xashiishka da'da yar ee iskuulka inay joojiso isticmaalka alaabadaas. Kaliya ma ogin inta ay le'eg tahay qayb ka mid ah qulqulka saliida xashiishka sharci darrada ah ee lagu ciyaaray 2018-19 "faafitaanka dhalinyarada faafa," laakiin waxaan ognahay in alaabadaasi ay si dhakhso leh ugu kasbadeen caan ka mid ah dhalinyarada isticmaala xashiishadda muddadaa (2017-2019) ).
Dhibaato kale oo la xiriirta natiijooyinka hordhaca ah: CDC waxay go'aansatay inaysan bixin tirooyinka sigaar cabista hordhaca ah ee 2020. Sanadkii la soo dhaafay 30-ka maalmood ee la isticmaalaa sigaarka wuxuu hoos ugu dhacay heerkii abid ugu hooseeyay ee 5.8 boqolkiiba ardayda dugsiga sare, iyo kaliya 2.3 boqolkiiba ardayda dugsiga dhexe. Miyuu isbeddelku sii socday sannadka 2020-ama hoos u dhaca kuuskuusku wuxuu keenay koror u dhigma cabitaanka sigaarka ee halista ah? Ma ogaan doonno illaa bisha Diseembar, maxaa yeelay sabab kasta ha noqotee, CDC ma aysan dooneynin inaan aragno natiijooyinkaas hadda.
"Dhaqanka" sii deynta natiijooyinka hordhaca ah ee laga soo qaatay NYTS waxaa la bilaabay 2018 oo uu markaa qabtay Wakiilka FDA-ga Scott Gottlieb, oo doonayay inuu muujiyo wax la taaban karo si uu u taageero sheegashadiisa ah in "carqaladeyn" isbeddelka qaangaarka ee dhallinta ay socoto. Laakiin wuxuu qaatay bilooyin dejinta masraxa kahor inta uusan soo saarin lambarro si uu ugu taageero hadalkiisii ​​dabacsanaa.
"Waxaan rumeysanahay inay jirto cudur faafa ee isticmaalka dhalinyarada," Gottlieb ayaa yiri Sept. 11, 2018. "Waxaan haysanaa sabab wanaagsan oo aan ku soo gabagabeyno gabagabeyntan iyada oo ku saleysan isbeddellada iyo xogta aan aragnay, kuwaas oo qaarkood weli ay yihiin kuwo hordhac ah oo noqon doona la dhammeystiray bilaha soo socda oo si guud loo soo bandhigi doono. ”
Gottlieb wuxuu ku hanjabay inuu mamnuuci doono alaabada dhadhanka leh isla markaana ka saari doono boodhadhka dukaamada c-dukaanka ugu caansan suuqa. Toddobaad ka dib, FDA waxay ku dhawaaqday olole warbaahineed oo cusub oo lidka ku ah faleebada. Xarunta dhexe waxay ahayd xayeysiis TV ah oo jilicsan oo loo yaqaan "Epidemic," taas oo maskaxda cajiibka ah ee xafiiska xakamaynta tubaakada ee FDA ay sida muuqata rumeysan tahay inay cabsi gelin doonto dhalinyarada xiisaha raadinaya ee ka fogaanaya uumiga.
Markii natiijooyinka hordhaca ah ee 2018 NYTS ugu dambeyntii la riixay bishii Nofeembar, warbaahinta wararka-oo ay hormuud ka yihiin Gottlieb, ololaha xayeysiinta, iyo durbaanka aan dhamaadka lahayn ee ka hortagga uumiga ee kooxaha ka hortagga tubaakada ayaa dhalaalay. Heerka "isticmaalka hadda" ee dugsiga sare wuxuu ka booday 11.7 illaa 20.8 boqolkiiba!
Wixii hay'adaha aysan qaban - maxaa yeelay ma aysan sameyn raba in - ahaa bixinta macnaha guud. Caddaynta cudurrada faafa ee argagaxa badanaa waxay ku saleysnaayeen adeegsiga 30-kii maalmood ee la soo dhaafay, taas oo ah heer shaki ah oo lagu cabbiro dhaqanka daroogada ee dhibaatada leh. Isticmaalka shay hal mar bishii ugu dambaysay waa wax aan caddayn u ahayn isticmaalka caadiga ah, iskaba daa "qabatinka". Waxaa laga yaabaa inay muujiso wax aan ka dhib badnayn sida fadhiga.
Falanqeyn taxaddar leh oo ku saabsan natiijooyinka 2018 NYTS ee cilmi-baarayaasha ka socda Jaamacadda New York (iyo jaamacadaha kale) waxay muujiyeen in boqolkiiba 0.4 boqolkiiba ka-qaybgalayaasha sahanka aysan waligood isticmaalin waxyaabaha kale ee tubaakada ah. iyo buufin 20 ama ka badan maalmood bishii. Si kale haddii loo dhigo, uumiga dugsiga sare ee soo noqnoqda mar hore ayaa sigaar cabbay.
"Kufsigu wuxuu ku kordhay dhalinyarada Mareykanka sanadkii 2018 ilaa 2017. Kordhinta waxaa lagu gartaa qaabab yar oo ah" 30-kii maalmood ee la soo dhaafay "qulqulka qulqulka iyo isticmaalka badeecada badan, iyo hoos udhaca qulqulka qulqulka ee ka imaado uumiga badan ee tubaakada," qorayaashu waxay ku soo gabagabeeyeen.
Markii 2019 NYTS ay muujisay koror kale, laga bilaabo 20.8 ilaa 27.5 boqolkiiba, jawaabta cabsida leh ee maamulka iyo warbaahinta ayaa la saadaalin karay; runti waxay ahayd uun xusuusta muruqa. Laakiin sheekadu isma badalin. Koox aqoonyahanno Ingiriis ah oo eegay natiijooyinka labadaba sahankii 2018 iyo 2019 ee CDC ayaa isku raacay falanqaynta kooxda NYU.
"Isticmaalka joogtada ah wuxuu ka dhacay 1.0% dadka kale ee isticmaala tubaakada tubaakada sanadka 2018 iyo 2.1% sanadka 2019," ayay qoreen. "Waxaa ka mid ah haddii kale tubaakada aan caqli-gal ahayn 30-maalmood ee dadka isticmaala sigaarka elektaroonigga ah ee 2019-ka, 8.7% ayaa soo sheegay damac halka 2.9% ay soo sheegeen inay doonayaan inay ku isticmaalaan 30 daqiiqo gudahood markii la soo tooso."
Natiijooyinkaasi ma muujinayaan in carruurtu "ku xiran yihiin" ama "la qabatimay," sida Ololaha Carruurta Tubaakada-Bilaashka ka ah iyo Hindisaha runta ah ee ka soo baxay war-saxaafadeedyadooda. Isticmaalka 30-maalmood ee lasoo dhaafay wuxuu u taagan yahay badiyaa tijaabo, maahan adeegsi caado ah. "Balwadaha" kuma dhacaan heerarka taariikhiga ah hal sano waxayna hoos udhacaan 30 boqolkiiba sanadka soo socda - laakiin fikradaha dhalinyarada ayaa si joogto ah u kaca oo si dhakhso leh ugu dhaca qaababka sidaas oo kale ah.
Runta aan laga hadlin ayaa ah in dhallinta Mareykanka aysan u faanin wax ka badan ama ka xoog badan kuwa ka yimid Ingiriiska ama meel kale. Laakiin mas'uuliyiinta Mareykanku waxay ku qeexaan qiiq-ku-qaangaarka qaangaarka qaab loogu talagalay in looga kiciyo argagax dadka waaweyn. Ilaa iyo inta ay awoodaan inay ku guuleystaan ​​saameynta loogu talagalay, waxba uma badna inay isbedelaan.
Sigaar kuleylka, E Xidhmada Sigaarka Bacaha, Sigaar Cabbida, E Sigaarka Uumiga Liibiya, Newport E Sigaar, Epen,